Mi A1 Guide –2: Magisk Root & OTA Update – Xiaomi Guide
Mi A1 ကို Root လုပ်ကြတာကတော့ Myanmar Zawgyi Font ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ Myanmar Unicode font ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သည်ကိစ္စတွေစဉ်းစားနေဖို့မလိုပါ။ Language တိုင်းရဲ့ စံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Unicode ကို လူတိုင်းမသုံးမချင်းတော့ ဖုန်းဝယ်တာနဲ့ မြန်မာစာရလား.. မြန်မာစာမှန်လားဆိုတာတွေ ဖြစ်နေအုံးမှာပဲ 😀 😀 . Android မှာ version5ကတည်းက Myanmar Language & Font ကပါပြီးသားပါ။ Unicode Standard နဲ့ပါ။
ကဲ .. Font ကိစ္စတွေ အသာထားလို့ လောလောဆယ် zawgyi font ထည့်ဖို့ အဆင်ပြေရအောင် Root လုပ်တာကိုပဲ လုပ်ကြည့်ကြရအောင်..။ Root လည်းရမယ်၊ OTA Update ထွက်လာရင်လည်း Update လုပ်လို့ရမယ်။ Update ပြီးသွားရင်လည်း Root Access ရနေရမယ်။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Root access နဲ့လုပ်ထားတာတွေလည်း အဆင်ဆက်ပြေနေရမယ် ( Zawgyi font ထည့်ထားတာတွေလိုမျိုးပေါ့ ) ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါမယ်။ ဒါဆို တစ်ကြိမ်သေချာလုပ်ထားရုံနဲ့ နောင်ကိုယ်လိုချင်သလို ဆက်ပြီးအဆင်ပြေပြေရှိနေရမယ်ပေါ့ခင်ဗျာ…။ Zawgyi font ကိစ္စက မြန်မာစာပါပြီးသား Firmware တင်တာလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။ အချို့ဆိုင်တွေကလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Stock Android က တစ်လတစ်ကြိမ် System update လုပ်ပါတယ်။ Update လုပ်တိုင်း သည် Firmware ကြီးကိုလုပ်ဖို့ တင်ဖို့ဆိုတာ Mi A1 ကိုင်သူတိုင်း အချိန်တိုက်ဆိုင်မှုရှိကြမှာမဟုတ်ပါ။
Mi A1 Guide ဆိုပြီး နောက်ဆုံး Update Firmware ကို Factory ထုတ်အတိုင်းဖြစ်အောင်တင်တာ၊ ပြီးတာနဲ့ OTA Update အဆင်ပြေအောင် System partition ကိုလုံးဝမထိပဲ Root လုပ်တာ၊ Myanmar Zawgyi Font ကိုထည့်တာ သည် Post [ –> MiA1 Guide : Firmware Flash, Magisk Root, MM Zawgyi Font <– ] မှာရေးသားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် post အတိုင်း လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Mi A1 တွေမှာပဲ OTA Update အဆင်ပြေပြေဖြစ်နေပါမယ်။ ဆိုင်ကဝယ်လာပြီး ဆိုင်ကမြန်မာစာလုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတာမျိုးတွေကတော့ ယခုနည်းအတိုင်း အဆင်ပြေမယ်လို့ အာမ မခံပါ။ တော်တော်များများက TWRP အကူအညီယူပြီး System partition ထဲမှာပဲ Font file တွေချိန်းပစ်လိုက်တာပါ။ အဲလို System partition ကိုပြုပြင်မှုလုပ်ထားလိုက်ရင် OTA တင်လို့မရပါ။ သည်တော့ အဲသည် post အတိုင်း အစဦးပြင်ဆင်ထား၊ လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Mi A1 ဖြစ်နေရပါမယ်။
ပထမ Guide မှာ System Update ကို Auto လုပ်တာပိတ်ခိုင်းထားတာမှတ်မိမှာပါ။ ဒါမှလည်း ကိုယ်မသိခင်လုပ်သွားလို့ ကိုယ်လိုချင်သလိုတွေမဖြစ်တော့ပဲ ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးဖြစ်မှာပါ။ Update ရလို့ Notification ပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက မိမိတို့သုံးထားတဲ့ Magisk Modules တွေကို ဖျက်ပစ်ရပါမယ်။ မိမိဖာသာ Web site တွေကနေ ဒေါင်းထားတာဆို zip file သိမ်းထားတာရှိမှာပါ။ Magisk Manager ထဲက Downloads အောက်ကသွားရွေးပြီးဒေါင်းခဲ့တာတွေဆိုလဲ Internal Storage/MagiskManager folder ထဲမှာ zip တွေရှိနေမှာပါ။ နောင်ပြန်ထည့်ခိုင်းဖို့ ထပ်ဒေါင်းစရာမလိုပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Magisk Modules တွေကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီး Disabled လုပ်၊ အမှိုက်ပုံးပုံလေးတွေကိုနှိပ်ပေးပြီး ဖျက်ထုတ်ဖို့ရွေးပေးပြီး Reboot လုပ်ပါ။ အမှန်ခြစ်တွေဖြုတ်၊ အမှိုက်ပုံးပုံတွေအားလုံးနှိပ်ပေးပြီးရင် Reboot ကတော့ မိမိဖာသာ Manual ပဲ Power key နှိပ်လို့ Restart ဆိုတာလုပ်ရမှာပါ။
ဖုန်းပြန်တက်လာရင် Magisk Manager ကိုဖွင့်ပါ။ Uninstall ဆိုပြီးလုပ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် လုံး၀ Uninstall မဟုတ်ပါ။ ပထမ Guide post မှာ ကျနော်တို့ root လုပ်ချိန်မှာ boot.img ကိုပဲ ပြုပြင်တာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်မိမှာပါ။ Magisk zip install လုပ်ချိန်မှာ Magisk က Original boot.img ကို သိမ်းပေးထားပါတယ်။ အဲဒါကို အခု Restore ပြန်လုပ်မှာပါ။ ဒါဆို OTA Update တင်ချိန်မှာ System Check လုပ်ရင် အောင်မြင်မှာပါ။ Fail မဖြစ်တော့ပါ။ အောက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်း Original boot.img ကို Restore ခိုင်းလိုက်ပါ။ Restoration Done ဆိုရပါပြီ။ Reboot လုပ်ပေးစရာမလိုပါ။
အိုကေ.. သည်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ Notification ပေါ်နေတဲ့ System Update ကို Install လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါပြီ။ အောက်ကပုံထဲကလို System Update ကို Download လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Step 1 of2ဆိုပြီး System Update ကို Install ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ဆင့် Step2of2ရောက်ချိန်မှာတော့ Home Key နှိပ်ထွက်ပါ။ Magisk Manager app ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း Magisk zip ကို Install လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ အင်တာနက်လေးကတော့ အမြဲဖွင့်ထားရမှာပေါ့ 😀
Magisk zip install ပြီးသွားရင်တော့ Recent key နှိပ်၊ System Update ထဲပြန်ဝင်ပြီး Restart ဆိုတာလုပ်နိုင်ပါပြီ။
ဖုန်းပြန်တက်လာချိန်မှာတော့ System Update လဲဖြစ်ပါပြီ။ Update လုပ်သွားတဲ့ Security Patch level ကို မြင်နိုင်ပါပြီ။ Magisk Manager app ထဲဝင်ကြည့်ရင် Magisk ကလည်း Already installed ဖြစ်နေရမှာပါ။ မိမိတို့ ယခင်သုံးခဲ့တဲ့ Magisk Modules zip များကိုလည်း ပြန်ထည့်လို့ရပါပြီ။ နေရာအစုံမှာ အမှန်အကန်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ Zawgyi font magisk module လေးကိုလည်း ထည့်နိုင်ပါပြီပေါ့ခင်ဗျာ…. 😀 😀
ထုံးစံအတိုင်း Developer Options ထဲမှာ OEM Unlocking ကို ON ထားပေး။ Automatic System Update ကို OFF ထားပေးတာသေချာစေဖို့ စစ်ဆေးပြီးသုံးနေလို့ရပါပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ် System Update ပေါ်လာရင် Post အစကအတိုင်း Magisk modules တွေခဏဖျက်၊ Magisk Manager မှာ Boot image restore လုပ်.. Update လုပ်.. Step2မှာ Magisk zip ကို Second Slot မှာ Install.. Reboot… အဲဒါဆို အဆင်ပြေနေပါပြီခင်ဗျာ.. 😀
Step2of ြြီးတော့ install Second slot after OTA ဆိုတယိ့ option magisk manager မှာ မပေါ်ဘူး ဆရာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခင်ဗျ
စထည့်ကတည်းကနေစပြီး Step by Step မှန်အောင် အစအဆုံးလုပ်လာခဲ့ရင် ပေါ်ပါတယ်။ သည်ထဲက SS တွေကလဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တာတွေကို ယူထားတာတွေပါ။